Akwehlanga lungehli ngoZuma kuleli | Isolezwe
Akwehlanga lungehli ngoZuma kuleli
Izindaba / 15 February 2018, 09:49am / BONISWA MOHALE
Akuqali ukuthi i-ANC ihoxise umengameli wayo njengoba nango-2008 uMnuz Thabo Mbeki wahoxiswa wabe esesula. Umehluko kulokhu wukuthi uZuma ubengafuni ukusula efuna ukunikwa isikhathi sokudlulisa ngendlela izintambo kumengameli olandeyo. Sibheka umehluko phakathi kukaMbeki noZuma.
Thabo Mbeki uzalwe ngo-18 Juni 1942.
Ube nguMengameli we-ANC kusukela ngo-14 Juni 1999 kwaze kwaba ngu-24 Septhemba 2008.
Ngesikhathi i-ANC itshela umphakathi ukuthi ayisabuthembi ubuholi bukamengameli Thabo Mbeki akuzange kube nesidingo sokuthi kuyiwe ePhalamende kuyovotwa ngoba wasamukela isinqumo yize ayesalelwe yizinyanga eziyisishiyagalolunye ehlandleni lakhe.
UMbeki watshelwa yiNational Executive Committee (NEC) ye-ANC ukuthi ayisabethembi ubuholi bakhe ngoSepthemba 19, wamemezela esizweni ngoSepthemba 21 ukuthi unikeze uSomlomo incwadi yokusula esikhundleni.
Ukusula kwakhe kwamukelwa yiPhalamende ngoSepthemba 24, 2008.
UMbeki akazange acele incazelo ngokungathenjwa kobuholi bakhe.
I-ANC yajuba uMnuz Kgalema Motlanthe owabe eyiPhini likaMengameli we-ANC ukuthi abe ngumengameli obambile.
Jacob Zuma uzalwe ngo-12 Ephreli 1942.
Ube ngumengameli we-ANC kusukela ngo-9 Meyi 2009 kuze kube nyakenye.
Kulokhu i-ANC ibhekene nengwadla njengoba isize yaphoqeleka ukusebenzisana ne-EFF efake isiphakamiso sokuthi kube nevoti lokungabethembi ubuholi bukaMengameli Jacob Zuma.
I-ANC iqale ukuxoxa noMengameli Zuma ukuba ehle esikhundleni emasontweni amathathu adlule.
NgoJanuwari 18 uMengameli we-ANC uMnuz Cyril Ramaphosa wamemezela ukuthi bayaxoxa noZuma ngokuthi ehle kahle esikhundleni kodwa akazange ehle.
Emasontweni amabili adlule iNEC itshele uZuma ukuthi ayisabuthembi ubuholi bakhe, wathi ngeke ehle ayihambe iyokhuluma neNational Working Committee (NWC) ngalolu daba.
I-NEC iphinde yakhuluma naye imcela ukuthi makehle esikhundleni kodwa wabuza ukuthi wenzeni, kungani kufanele ehle esikhundleni sakhe ngoba akukho okubi akwenzile.
Kuleli sonto kube nomhlangano oyisipesheli weNEC odonse kwaze kwaba sentathakusa ngoLwesibili.
NgoLwesibili, uNobhala Jikelele we-ANC, uMnuz Ace Magashule umemezele ukuthi sebevotile ukuthi ababuthembi ubuholi bukaZuma, bayamhoxisa futhi bamnika amahora angu-48 ukuba aphendule.
Kushicilelwe uZuma engakaphenduli.
Izolo uvele kuthelevishini ekhala ngokuthi yena akakaze anikwe isizathu sokuthi kungani kumele ehle esikhundleni.
Uthe udaba lokungathenjwa kobuholi bakhe luzodala uqhekeko kwi-ANC ngoba usebone elinye ilungu likhahlela umuntu ngaphandle kwaseLuthuli House.